မင်းနဲ့ငါ vs. သင်ညှိနေပါသလား? | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 13, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အတော်လေးနည်းနည်းစာဖတ်ပြီးနောက် ညှိထားသည်အသင်းမှာမေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုကကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ် လက်တွေ့ကျကျစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောနေသလားသို့မဟုတ်သင်၏ဖောက်သည်များအကြောင်းပြောနေသလား။
သင်၏နေရာတွင်သင်၏အခွင့်အာဏာကိုတရားမျှတရန်အရေးကြီးသော်လည်းသင့်ဖောက်သည်များအတွက်သင်ရရှိခဲ့သည့်အရာများအကြောင်းပြောရန် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ငါမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် တွစ်တာ နှင့်အပါအဝင်အတော်လေးရှေးရှေးထံမှအချို့သောအာရုံကိုရတယ် အန်ဒီ Beal of စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Pilgrim.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းဘလော့ဂ်ပေါ်မှာစာဖတ်သူတွေထက်ငါပြောနေသလား။ ငါထွက်ရှာရန်တစ် Tuned In Calculator ကိုရေးသားခဲ့သည်! ဂဏန်းတွက်စက်သည်သင်၏အစာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပမာဏကိုတိုင်းတာသည် ငါ, ငါ, သင်, သင်, သင်, ငါတို့, \_ t feed ကို၏အကြောင်းအရာစသည်တို့ကို။ ပိုကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကအလေးချိန်ပိုတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏ရလဒ်များမှာ ၁၀ အနက်မှ ၉ ခုဖြစ်သည်။
ဆိုလိုတာကငါပြောတာကိုဆိုလိုတယ် သငျသညျ အချိန်အများစု! စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကအဓိက A-lister တွေရဲ့ feed လိပ်စာတွေကိုငါတင်လိုက်ပြီးရလဒ်တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးပဲ။ ရိုက်ချက်ပေးပါ သင်တစ် ဦး Narcissists (0 ရမှတ်) ရှာတွေ့လျှင်, ငါ့ကိုသိပါစေ! ငါရလဒ်များ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအချို့သောပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါမိတ္တူကောက်ဖို့သေချာပါစေ ညှိနှိုင်း: စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုများကို ဦး တည်စေသောထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာကောင်းများကိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာထူးခြားသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်၏ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအချက်မှာအပိုင်းတစ်ခုစီသည် Tuned In ကုမ္ပဏီများအတွက်လက်တွေ့ကျသောဥပမာများကိုပေးသည်။
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်သမားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်နေပြည်တော်pinterest ပြိုင်ပွဲလက်တွေ့ကျကျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးtestflight တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှWordPress
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 7: 50 AM
ငါသိပ်မကောင်းဘူး ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ၆၀% ။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤနားလည်သည်မသေချာဘူး။ အဲဒါငါ့ဘလော့ဂ်ပါ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအကြောင်းပြောဆိုရန်မလွယ်ကူပါ။ သူတို့ကိုငါစကားပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒါကငါ့ကို“ ငါ” နဲ့“ ငါ့ကို” စတဲ့စကားလုံးတွေကိုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်စေတယ်။ ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဝဘ်ဆိုက်အတွက်ကော်ပီကူးချင်ရင်“ me” factor က ၁၀% ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းလိမ့်မယ်။
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 10: 33 AM
ငါပက်ထရီသဘောတူတယ် သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းအမြဲပြောနေမလားဆိုတာကြည့်ဖို့ခက်တဲ့နည်းနည်းလေးပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောနေရင်တောင်ပရိသတ်အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအများကြီးပြောပေမယ့်သူတို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားဆက်သွယ်ပါတယ်။
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 8: 42 AM
Cool tool ကို! ငါပက်ထရစ်နှင့်အတူတူပင်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းညွှန်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော်ရမှတ်တစ်ခု၏အရေးပါမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကိန်းဂဏန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုင်းတာသည်၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုအတိုင်း လိုက်၍ သတ်မှတ်ထားသောနံပါတ်ကိုကြည့်ခြင်းထက် ပို၍ အဖိုးတန်နိုင်သည်။
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 9: 05 AM
Marketing Pilgrim တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်“ အချိန်” ၏ ၆၀% အကြောင်းပြောကြသည်။ စျေးကွက်သတင်းနှင့်ပတ်သက်သော“ ငါတို့” ထင်မြင်ချက်နှင့်“ သူတို့” အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုရှေးရှေးများကဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုရန်အတွက်လူများသည်ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ဒါကောင်းတဲ့ချိန်ခွင်ပါပဲ။
တကယ်လို့သင်ဟာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတကယ်ရောင်းနေရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
Nice ကိရိယာ Doug!
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 10: 37 AM
ငါသဘောတူတယ်၊ အန်ဒီ ငါဘလော့ဂ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောဖို့ပြောတာဟာ visitors ည့်သည်တွေဟာသင်နဲ့သင့်ကိုယ်သင်ရော၊ ပညာရှင်ပါပါဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါ။
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 9: 55 AM
ဝမ်းသာပါတယ်သင်စာအုပ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည် ဤသည်သည် Tuned In spectrum တွင်သင်မည်သည့်နေရာ၌ရောက်နေသည်ကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအပေါ်မည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အလားတူနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်၊ အမှန်တကယ်စျေးကွက်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီး၍ ၀ ယ်သူများနှင့်ကိုက်ညီသောဖြေရှင်းနည်းများကိုစတင်သည်။ သူတို့ကိုသင်နှင့်သင်၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမျှဝေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သြဂုတ် 14, 2008 မှာ 10: 35 AM
အားဖြင့်ရပ်တန့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်! ငါစာအုပ်ကိုတကယ်ပဲနှစ်သက်ပြီးသင့်အဖွဲ့ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတယ် - သင်ရှေးရှေးကသင်၏ဗဟုသုတနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာကိုယူပြီးအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတာသိသာထင်ရှားသည်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်!
14:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 46
Doug tool ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ၅၀-၅၀ ဂိုးသွင်းခဲ့တယ် အန်ဒီပြောခဲ့သလိုပဲမျှမျှတတကောင်းတဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက်။
အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိဘရိုရှာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဆိုက်တစ်ခု (တိုက်ရိုက်မေးလ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကြော်ငြာမဆို) တွင်ပါသော“ သင်” သို့မဟုတ်“ သင်၏” စကားလုံးများသည်“ ငါ” နှင့်“ ငါ့ကို” ထက်ပိုသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် က။ ဤရွေ့ကားကြီးမြတ် copywriting နောက်ကွယ်မှအခြေခံသဘောတရားများကိုဖြစ်ကြသည်။
လူများစတင်နိုင်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်သော copywriting စာအုပ်သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာကြော်ငြာလုပ်ငန်းဖြစ်သော Claude Hopkins ၏ဂန္ထဝင်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ (ဖတ်ရန်မဖြစ်သေးပါ) ဖတ်ရန်လိုပြီးအောင်မြင်သောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်သူတို့၏စီးပွားရေးစျေးကွက်ကိုပြောင်းလဲရန်၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဲဒါကိုဖတ်တဲ့သူတွေတောင်မှ၊ အဲဒါကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ဖတ်ရှုရတယ်။
14:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 10
အရမ်းကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခု။ ၎င်းကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် (၉) ဂိုးသွင်းယူသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ (စိတ်သက်သာရာရစွာဖြင့် - စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သည့်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရမှတ်ရှိပါကစဉ်းစားပါ။ ) ဂရုပြုပါ၊ David
15:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 17
Me Points: ၈၅ အခြားအချက်များ - ၉၁
ထောက်ထားစာနာမှု (၁၀ ခုအနက် ၅ ခု)
အတိအကျ tool ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သြဂုတ် 16, 2008 မှာ 7: 56 AM
စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်က ၉ ကနေ ၈ အထိသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ !! David
18:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 34
ဒေါက်ဂလပ်၊ သင်၏ညှိထားသောဂဏန်းတွက်စက်ကိုမျှဝေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Tuned In စာအုပ်၏ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းသောကာလကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်ကူညီသောကိရိယာများအတွက်ဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုရမှတ်အတူတက်လာပုံကိုအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ သင်ရမှတ်တွက်ချက်ရန်သင်အသုံးပြုသောမက်ထရစ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ထားပြီးပြီလား။ ကျွန်ုပ်၏အမှတ်တိုးတက်စေရန်သင်၏ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသေချာစွာအသုံးပြုပါမည်။ သင်ရမှတ်ကိုဘယ်လိုရလဲဆိုတာကိုသိထားခြင်းကပိုများလာလိမ့်မည်။ -Michael
18:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 25
ဒေါက်ဂလပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၁၀/၁၀ ရရှိပုံရသည်
(အမှတ်များ - ၁ အခြားအချက်များ - ၈၀) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ အာရုံစိုက်သင့်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာရပ်တန့်ဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်။ http://www.kasumiseo.co.uk/ - SEO နှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်အကြောင်းကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်လုပ်သည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ပေးပါလိမ့်မည်။ )
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကမင်းရဲ့ဂဏန်းတွက်စက်အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကဘာလဲလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။